Maxaad ka ogtahay qorshaha ay Villa Soomaaliya u dejisay Senator Muuse Suudi? | Warbaahinta Ayaamaha
Maxaad ka ogtahay qorshaha ay Villa Soomaaliya u dejisay Senator Muuse Suudi?
MUQDISHO-AYAAMAHA-Ilo xog ogaal ayaa xaqiijinaya saraakiil ka tirsan madaxtooyada Dowlad-goboleedka Hirshabeelle, Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe madaxweynaha maamulkaasi iyo Villa Soomaaliya ayaa ka shaqaynayo qorshe halis ku ah Senator Muuse Suudi Yalaxoow.
Kulan ka dhacay Villa Somalia oo u dhexeeya madaxweyne Farmaajo, Fahad Yaasiin, Cali Guudlaawe iyo Luqmaan Xaaji gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa la isku raacay in aan Muuse Suudi laga reebin liiska Musharixiinta balse baarlamaanka lagu cadaadiyo in ay doontaan ninka kursiga kula qoran oo ay wadato Villa Somalia.
Dhanka kale beesha Mudullood oo mudooyinkii dambe waday kulamo is dabajoog ah oo looga hadlaayay masiirka siyaasadeed ee beesha ayaa la isku raacay in Muuse Muuse loo dhaafo kursigiisa maadaama uu yahay oday beesha ka tirsan aadna isku hayaan madaxweyne Farmaajo.
Sarkaal kale oo ku dhow madaxweyne-yaashii hore ee dalka ayaa u sheegay Warqaad in la isku raacay in Muuse uu noqdo hoggaamiye beeshu gurigiisa ku soo hirato noqda ninka xaliya arimaha cida dhexdeeda ah.